Yaa ku guuleystay abaal-marinta kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2018-19?.. + SAWIRRO – Gool FM
Tartankan horyaalka Premier League waxaa illaa maalinta ugu dambeysay isla tagay kooxaha Man City iyo Liverpool, inkastoo ugu dambeyn Reds looga qaaday hal dhibic oo qura.
Marka laga yimaado tartanka horyaalka oo xiiso gaar ah lahaa ayaa haddana waxaa tartan kale oo adag uu ka jiray dhanka gooldhalinta horyaalka, iyadoo haatan abaal-marinta kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League xilli ciyaareedkan ay wadaageen saddex weeraryahan.
Saddexda xiddig ee ka soo jeeda qaaradda Afrika oo kala ah Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ku wada guuleystay ama qeybsaday abaal-marinta kabta dahabka ah ee gooldhalinta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan kaddib markii ay wada dhaliyeen min 22 gool.
Mohamed Salah ayaa ku guuldarreystay inuu maalintii ugu dambeysay horyaalka wax gool ah ku kordhiyo goolashiisii 22 gool ahaa kulankii ay shalay la dheeleen Wolves.
Sadio Mane ayaa dhankiisa labo gool dhaliyey kulankii kooxdiisa Reds ay garoonkeeda Anfield guul 2-0 kaga gaartay shalay kooxda Wolverhampton Wanderers, taasoo ka dhigtay inuu dhaliyey 22 gool oo horyaalka Ingiriiska ah xilli ciyaareedkan.
Dhaliyaha kooxda Arsenal ee Aubameyang ayaa sidoo kale labo gool shabaqa gaarsiiyey kulankii ay 3-1 guusha kaga gaartay Gunners shalay naadiga Burnley, inkastoo uu hanan lahaa kaligiis abaal-marintan, laakiin waxa uu khasaariyey fursad uu saddexleey ku dhalin karay kulankan weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey.
Mane iyo Aubameyang ayaa markii ugu horreysay abaal-marintan ku guuleystay, halka Salah uu si xiriir ah ugu u hantay abaal-marintan kabta dahabka ah ee gooldhalinta Premier League labo xilli ciyaareed oo isku xiga, kaddib markii uu 32 gool ku qaaday xilli ciyaareedkii hore ee 2017-18.
Halkaan hoose ka eeg xiddigaha goolasha ugu badan ka dhaliyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2018-19:-
Jamie Vardy (18)
RASMI: Goolhayaha kooxda Liverpool ee Alisson Becker oo ku guuleystay abaal-marinta Gacmo Gashiga Dahabiga ah ee Premier League